February 20 ~ विज्ञान संसार
Posted by Om Bhandari On 5:33 PM
सोखले होस या आवश्यकताले, मोबाइल फोन बोक्ने प्रतिस्पर्धा नै चलेको छ । तर हाम्रो हरपलको साथी मोबाइलको प्रयोगले स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्न सक्छ । मोबाइल फोनको बढी प्रयोग गर्दा मस्तिष्क घात (ब्रेन ह्यामरेज), हृदयघात, ब्रेन ट्यूमर, क्यान्सर लगायत विभिन्न स्वास्थ्य समस्याहरु देखा पर्न सक्ने चिकित्सकहरुको दाबी छ ।
ज्ञघ मोबाइल मुटु रोगीका लागि त अझ सबैभन्दा बढी हानिकारक छ । नर्भिक अस्पतालका बरिष्ठ मुटु रोग विशेषज्ञ डाक्टर भरत रावतको भनाई अनुसार मुटुमा पेस मेकर राखेका बिरामीले त मोबाइल प्रयोग गर्न नहुने बताउँछन् । मोबाइल फोन टाउकोको अति नजिकै राखेर प्रयोग गरिन्छ । एक सेन्टिमिटरसम्म नजिकै राखेर प्रयोग गर्दा यसले टाउकामा कोषहरुमा सामान्य असर गर्छ तर यो धेरै हानिकारक हुंदैन । मोबाइल संचालन हुंदा उत्पन्न हुने रेडियो फ्रिक्वेन्सी शक्ति शरीरले शोषण गर्छ र शरीरमा ताप उत्पन्न गर्छ । यसले पनि शरीरका कोषलाई हानि गर्छ, रेडियो फ्रिक्वेन्सीको प्रभाव शरीरका धेरै अंगमा परिरहेका अवस्थामा यसको असर पनि बढी छ । खास गरी मोबाइल फोन टाउकोमा नजिकै राखेर लामो समय प्रयोग गर्दा स्वास्थ्यमा त्यसको असर परेको अनुसन्धानबाट पाइएको छ । मोबाइलले मानव स्वास्थ्यलाई असर गर्छ, त्यसैले अस्पतालको इन्टेन्सिभ केयर युनिट (आई.सी.यू मा मोबाइल फोन प्रयोग गर्न पाइदैंन । यदि मोवाइलले केही असर नगर्ने हो भने हामीहरुले आइसियू कक्षमा पनि प्रयोग गर्न पाइथ्यो होला । हवाईजहाज भित्र पनि मोबाइलको प्रयोग गर्दा यान्त्रिक गडबडी हुन सक्छ, जहाजको उडानलाई समेत प्रभावित गर्ने मोबाइलले मान्छेलाई त्यत्तिकै छाड्थ्यो किन ?
मोबाइलको प्रयोगले मात्र होइन, घरका छानामा राखिएका बेस स्टेशनले पनि स्वास्थ्यमा असर गर्ने विज्ञहरुको दाबी छ । मोबाइल टावर नजिकैको घरको छतमा बस्न हानिकारक हुन्छ । टावरको नजिकै बालबालिका खेल्ने पढने ठाउँ छ भने ख्याल गर्न चिकित्सकहरुको सुझाव छ । बेस स्टेशन कम पावर भएको रेडियो एन्टेना हो । यसले मोबाइल प्रयोगकर्तामा सञ्चार गर्छ । बेस स्टेशनबाट प्रशारण हुने रेडियो फ्रिक्वेन्सी उपभोक्ताले प्रयोग गर्ने मोबाइलसम्म पुग्छ र मोबाइल सेटबाट रेडियो फ्रिक्वेन्सी एन्टेना हुंदै अर्को मोबाइल प्रयोगकर्तासम्म पुग्छ । यसरी प्रशारण हुने रेडियो फ्रिक्वेन्सीले मानिसको स्वास्थ्यमा असर पार्ने कुरा नै अहिले संसारभरी वादविवादको विषय बनिरहेको छ । अहिलेको मोबाइल सिस्टम ८ सय देखि १८ सय मेगाहर्ज को फ्रिक्वेन्सीमा संचालन हुन्छ । यो फ्रिक्वेन्सीलाई कतिपय मानिसले एक्सरे अथवा गामा-रे ले जस्तै शरीरलाई हानी पु¥याउंछ भनिरहेका छन ।
मोबाइल फोनको प्रयोगले स्वास्थ्यमा असर पार्छ भन्ने विश्वव्यापी बहस हुन थालेपछि विश्व स्वास्थ्य संघले अध्ययनका लागि इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्ड प्रोजेक्ट नै स्थापना गरेको छ । यस परियोजनाले मोबाइलबाट जनस्वास्थ्यमा पार्ने असरका बारेमा अध्ययन गरिरहेको छ । १० वटा भन्दा बढी देशमा मोबाइलको प्रयोगले स्वास्थ्यमा पार्ने असर खासगरी क्यान्सरका बारेमा
अध्ययन भइरहेको छ । मोबाइल फोनको प्रयोगले टाउको र घांटीको क्यान्सर हुने सम्बन्धमा क्यान्सर विशेषज्ञहरुको टोली सम्मिलित भएर अध्ययन भइरहेको छ । विश्व स्वास्थ्य संघले मानिसहरुलाई रेडियो फ्रिक्वेन्सीको असरबाट बच्न केही आधारपत्र तयार गरेको छ ।
मोबाइल फोनको अर्को बैगुन छ, त्यो हो, सवारी दुर्घटना । मोबाइलको हयाण्ड सेट प्रयोग गरेर होस या ह्याण्डस फ्री किट प्रयोग गरेर, सवारी चलाउंदै मोबाइल प्रयोग गर्दा ट्राफिक दुर्घटनाको सम्भावना बढ्दै गएको छ । वैज्ञानिकहरुले मोबाइलबाट लाग्ने रोगबाट बच्न लामो कुरा गर्ने प्रवृत्ति छोटयाउन सुझाव दिएका छन ।
- यामप्रसाद पौड्याल (यमन)
(बिज्ञान लेखमालाबाट )
Posted by Om Bhandari On 2:24 PM
हालै प्रकाशित एक अनुसन्धान अनुसार वैज्ञानिकहरुले बजारमा पाईने रासायनिक व्याट्री कै
काम गर्ने जैविक व्याट्रीको विकास गर्न सक्षम भएका छन् । उक्त व्याट्रीको उत्पत्तिले ल्यापटप,
मोबाइल तथा अन्य विद्युतीय उपकरणहरु सोडा मिसाएको चिनीपानी वा वनस्पति घ्यूले पनि
रिचार्ज गर्न सकिने भएको छ ।
अमेरिकी रसायन समाजको २४० औं राष्ट्रिय सम्मेलनमा
University of South Louis, Missouri
का वैज्ञानिक डा. सेली मिन्टीरले उक्त उपकरणको विवरण दिंदै भन्नुभयो "यो
जैविक व्याट्रीले उत्पादन गर्ने विद्युतको प्राविधिक पृष्ठभूमि मानिस तथा अन्य जीवमा ऊर्जा
उत्सर्जित हुने विधिमा नै आधारित छ ।" उक्त व्याट्रीको पहिलो पटक सार्वजनिक प्रर्दशन गर्दै
डा. मिन्टीर अगाडि भन्नुहुन्छ । "यदि यो उपकरणलाई अझै परिमार्जित तथा विकास गर्न
सकियो भने हाल बजारमा पाइने साधारण तथा रिचार्ज गर्न मिल्ने व्याट्रीलाई विस्थापन गर्न
जिवित प्राणीमा ऊर्जाको स्रोत अर्बौ संख्यामा हुने कोषका भित्री अंगहरु माइटोक्रोन्ड्रिया
हुन् । यी माइटोकोन्ड्रियालाई कोषको शक्ति केन्द्रको रुपमा लिइन्छ । डा. मिन्टीर र उनका समूहले विकास गरेको जैविक व्याट्री पनि यही माइटोकोन्ड्रियाले उत्सर्जित गर्ने ऊर्जामा आधारित रहेको छ । माइटोकोन्ड्रियाले कोषमा संकलित खाद्य क्यालोरीलाई रसायनिक ऊर्जामा रुपान्तरण गर्दछ । सो प्रक्रियामा रसायनिक अवस्थामा रहेको चिनी,
बनाउँछ, यही ATP नै कोषमा
ऊर्जाको अवस्था हो जुन प्राणीको शरीरलाई चाहिएको बखत ऊर्जाको रुपमा परिचालित हुन्छ ।
जीवहरुमा खाद्य वस्तुहरु जस्तै चिनी, बोसोबाट ऊर्जा उत्पन्न गर्ने यही विधि नै जैविक
व्याट्रीद्वारा ल्यापटप र मोबाइलमा इन्धन भर्ने सिद्धान्त हो ।
डा. मिन्टीरका अनुसार माइटोकोन्ड्रियाबाट निर्मित जैविक व्याट्रीमा माइटोकोन्ड्रियाको पातलो
तहलाई दुईवटा इलेक्ट्रोडको बीचमा राखिन्छ । यसरी राखिएको इलेक्ट्रोडहरुमा एउटा इलेक्ट्रोड वायु प्रवेश गर्न सक्ने किसिमको हुन्छ । यसरी बनाइएको जैविक व्याट्रीमा जैविक इन्धनहरु
जस्तैः चिनी, बोसो वा अल्कोहल र अक्सिजन दिइयो भने यसले क्रमिक रुपमा विद्युत उत्पादन
गर्दछ । साधारण व्याट्री भन्दा फरक यस्ता व्याट्रीको चार्ज सकिदैन् । इन्धन र अक्सिजन
रहेसम्म जैविक व्याट्रीलाई रिचार्ज गरिरहनु पर्दैन ।
डा. मिन्टीर अगाडि भन्नुहुन्छ "यस किसिमको जैविक इन्धन व्याट्रीहरु नयाँ भने होइनन् ।
वैज्ञानिकहरुले प्रकृतिका प्राकृतिक सिद्धान्त अनुसरण गरी विभिन्न जैविक इन्धन व्याट्री बनाएका
छन् । " तर यसरी माइटोकोण्ड्रियाको प्रयोग गरी बनाइएको जैविक व्याट्री यो नै पहिलो हो ।
यसरी विकसित भएको जैविक व्याट्री ल्यापटप र मोबाइलको व्याट्री बाहेक पनि विभिन्न क्षेत्रमा
उपयोगिता हुन सक्ने देखिएको छ । विशेष गरी ताररहित तापक्रम सचेतक, चाल सचेतक,
गाडी तथा वाहन निगरानी राख्न् । यसै गरी लुकाइ राखेको विष्पोटक पदार्थ पत्ता लगाउन पनि
यसको उपयोग हुन सक्ने देखिएको छ ।
- रविन्द्र पाण्डेय
Posted by Om Bhandari On 6:38 AM
सामान्यतया ठोस पदार्थ तताउँदा तरल बन्दछ र यो प्रक्रियालाई नै पग्लनु भनिन्छ । यसको
अनुभव हामी सबैले गर्मीयाममा आईसक्रिम छिट्टै पग्लिने घटनाबाट गरेको हुनुपर्दछ । तर
पदार्थको यो सामान्य गुण भन्दा भिन्नै प्रकृतिको यौगीकहरुको निर्माण गर्न म्यासाच्यूसेट्स
ईन्स्टीच्यूट अफ टेक्नोलोजीका अनुसन्धानकर्ता सफल भएका छन् । उनीहरुले आजकाल
कम्प्यूटरका चिप्स देखी सौर्य प्यानलसम्म प्रयोग गरिएको अत्यन्त लोकप्रिय तत्व "सिलिकन"
लाई तामा, निकल साथै फलामसँग मिलाएर उक्त अनौठो गुण भएको यौगिक बनाएका हुन् ।
यो ९०० डिग्री सेल्सियस तल चिस्याउँदा पग्लन्छ जबकी सिलिकन तत्व मात्र १४१४ डिग्री
सेल्सियस वा सो भन्दा माथि मात्र पग्लन्छ ।
उक्त इन्स्टिच्यूटका टोनीयो, बुनासिसी, स्टीभ हडल्सन तथा बोना न्यूम्यान सम्मिलित
अनुसन्धान टोलीले हालै "एडभान्सड मटेरीयल्स" नामक जर्नलमा प्रकाशित उक्त पदार्थको
अनौठो गुणले सिलिकन प्रयोग हुने उपकरणको लागत मूल्य घटाउने विश्वास गरिएको छ ।
खास गरी सोलार सेल जस्ता उपकरण उत्पादन गर्न कम मूल्य पर्ने कमशल सिलिकन प्रयोग
गर्दा उत्पादन प्रक्रियामै सिलिकन शुद्धिकरण हुने सम्भव देखिन्छ साथै यस अनुसन्धानले
सिलिकनको नानोमिटर साईजका ताप तथा विद्युतीय सुचलाक नलीहरुको निर्माण गर्न सकिने
वास्तवमा भन्ने हो भने यो युग सिलिकन प्रविधिको युग हो । हामीले प्रयोग गर्ने सबै जसो
ईलोक्ट्रोनिक सामान भित्र सिलिकन निर्मित चिप्सको प्रयोग कुनै न कुनै रुपमा भएकै हुन्छ ।
सिलिकनको विद्युत सञ्चालन क्षमता अर्थात् कन्डक्टीभीटी विद्युतका सुचालक भन्दा कम तर
कुचालक भन्दा बढी भएकोले यसलाई अर्धचालक (सेमीकण्डक्टर) भनिन्छ । आजसम्म सबैभन्दा
बढी अध्ययन, अनुसन्धान गरी विभिन्न उपकरण बनाउन प्रयोगमा ल्याईएका सेमिकण्डक्टर
तत्व पनि सिलिकन नै हो । पृथ्वीको बाहिरी तह (क्रस्ट) मा अक्सिजन पछि दोस्रो प्रचुर
मात्रामा पाइने तत्व नै सिलिकन हो । यो तत्व आफ्ना यौगिक अवस्थामा सिलिका वा
सिलिकेटका रुपमा रहन्छ । सामान्यतया सिलिकन सेमिकण्डक्टर सिलिकन डाईअक्साइड (
सिलिका) लाई प्रशोधन गरी प्राप्त गरिन्छ । पूर्णतया शुद्ध सिलिकनका चक्का निर्माण गर्नु
असम्भव प्राय हुन्छ । तथापि, उच्च गुणस्तरका ईलेक्ट्रोनिक उपकरणहरु बनाउन कमसेकम
अशुद्धता भएको सिलिकन चक्का (वाफर) आवश्यक पर्दछ, जसको उत्पादन प्रक्रिया अत्यन्तै
जटिल भएकोले साह्रै महँङ्गो पर्न आउँछ । अझ उक्त सिलिकनबाट ईलेक्ट्रोनिक उपकरण
बनाउने क्रममा निकै चरणहरु पार गर्नु पर्दछ । उक्त चरणहरु मध्येमा उच्च तापक्रमबाट
सिलिकन गुज्रदा यसमा विभिन्न किसिमका अशुद्ध तत्वहरुको सम्मिश्रण भई सिलिकन
अशुद्धिकरण तर्फ धकेलिन्छ, जुनकि उक्त उपकरणको जीवन छोट्याउन साथै क्षमता ह्रास गर्न
काफी हुन्छ । त्यस्तै सोलार सेल निर्माणमा प्रयोग गरिने सिलिकन कम गुणस्तरको हुन्छ ।
अर्थात्, उक्त सिलिकन वाफरमा पहिले नै थुप्रै प्रकारका गैर सिलिकन तत्वहरु मौजुद रहन्छन् ।
अतः उक्त सिलिकन वाफरहरु सोलार सेल बनाउँदा विभिन्न उच्च तापीय चरणहरुबाट गुज्रदा
अझ अशुद्ध भई अपेक्षित क्षमताको सेल बनाउन अड्चन खडा हुन्छ ।
तर, अब उप्रान्त चिस्याउँदा पग्लने तामा निकल र फलाम युक्त अशुद्ध सिलिकन प्रयोगले माथि
उल्लेखित समस्या खेप्नु पर्ने छैन । अर्थात् यो नयाँ खालको सिलिकनको यौगिकलाई उपकरण
निर्माणार्थ उच्च तापीय प्रक्रियाको चरणमा लैजाँदा अशुद्धिकरणको साटो शुद्धिकरण हुन्छ । अतः
यसरी बनाईने उपकरणको जीवन तथा क्षमता बृद्धि हुनुका साथै लागत मूल्य पनि घट्न
जान्छ । यस्तो विशिष्ट गुण भएको पदार्थ बनाउन सिलिकनका दुई तहको बीचमा तामा,
निकल र फलाम जस्ता धातु भरेर उच्च तापक्रममा तताइन्छ । फलतः ती सबै धातुहरु
सिलिकनको पग्लने विन्दु (मेल्टीङ प्वाइन्ट) भन्दा तलकै तापक्रममा सिलिकनमा घोलिन्छन् र
अति संतृप्त घोल बनाउँदछन् । यस प्रकारले ठोस अवस्थाकै सिलिकनले उक्त धातुहरु पचाउँछ
र जब हामी यसलाई चिस्याउने क्रममा एउटा तापक्रममा पुग्छौ उक्त पदार्थबाट धातुहरु
थिग्रीएर बाहिरिने क्रमलाई उत्प्रेरित गर्दछ । फलस्वरुप उक्त ठोस पदार्थ तरल अवस्थामा
परिवर्तित हुन्छ, जसलाई नै पग्लिनु, अर्थात् मेल्टीङ भनिन्छ ।
- डा. सुरेश कुमार ढुंगेल
तालु खुइलिएको मान्छे बुद्धिमान हुन्छ, धनी हुन्छ भनेर, तालु खुइलिनु सान भन्न खोजे पनि तालु
खुइलिएको कसैलाई मन पर्दैन । कपाल झर्नु एक समस्या हो । यसका कारणहरु धेरै छन् ।
एउटा कारण त उमेर पाको हुँदै गएको व्यक्तिको तालु खुइलिनुलाई स्वभाविक मानिन्छ यसलाई
चिन्ताको विषय मानिदैन । जीवन रस (यसलाई अंग्रेजीमा हार्मोन भन्दछन् को कमीले पनि कपाल
झर्न सक्छ, जस्तो थाइराइड ग्रन्थीबाट निस्कने थायरोक्सीन भन्ने जीवन रसको कमी भयो भने वा
ग्रन्थीको राजा, पिटयूटरी ग्रन्थीबाट निस्कने रसको कमी भयो भने, मृगौला माथि रहने एड्रनल
ग्लाण्डमा ट्यूमर भयो भने इत्यादि ।
रोग लागेर जस्तो टाइफाइड ज्वरो, भिरंगी, कुष्ठ रोग इत्यादि भएर, धेरै घाममा काम गर्नाले,
क्यान्सर रोग निको पार्न लिएको औषधिहरुबाट इत्यादि । दाद भन्ने फंगसको संक्रमणबाट अथवा
कुनै घाउ भएर आगोले जलेर, खटिरा भएर, छालाको क्षयरोग भएर पनि कपाल झर्न सक्छ ।
कपाल झर्ने वा खुइलिनुमा बंशानुगत कारणको ठूलो भूमिका रहेको हुन्छ । यदि वंशानुगत कारणले
भएको रहेछ भने चिकित्सकको सहयोगले पनि खुइलिने क्रम रोकिन गाह्रो हुन्छ । घर्षणले पनि
कपाल खुइलिन सक्छ । एलोपेसिया एरिएटा भन्ने रोगमा त झन अचम्म तरिकाले एक्कासी कपाल
खुइलिन्छ । झन एलोपेसिया टोटालिसमा त पुरै तालु नै चिण्डो हुन्छ । आँखीभौको कपाल समेत
झर्छ । भाग्यवश नेपालमा यो रोग कमै देखिन्छ ।
कपाल झर्न कम पार्ने उपायहरु
रोगको कारण मात्र व्याख्या गरेर चिकित्साको बारेमा चर्चा नगर्दा नैराश्य हुन्छ । एलोपेसियाको
रामवाण चिकित्सा भने छैन । तर, कपाल झर्न कम गर्न अथवा कपाल झर्ने अवस्था आउन नदिन
धेरै किसिमको प्रक्रिया अपनाउन सकिन्छ । एकदम जोडले बुरुस लगाउने वा मालिस गराउने
इत्यादि प्रक्रियाले झन कपाल झर्छ । दिनहुँ नुहायो भने कपाल झर्छ भन्नु ठीक होइन । कपाल
फोहोर भयो भने कपाल झर्छ । त्यसैले कपाल दिनहुँ सफा गर्नु नै उपयुक्त हुन्छ । स्याम्पु वा साबुन
बदली बदली लगाउनु भन्दा एउटै किसिमको उपयुक्त हुने साबुन वा स्याम्पु प्रयोग गर्नु पर्दछ ।
कपालमा जुम्रा पर्न दिनु हुँदैन । एक त जुम्राले कपालको जरालाई कमजोर बनाइदिन्छ भने अर्को
कपाल धेरै कन्याउँदा घर्षणले गर्दा पनि कपालको जरा कमजोर हुन जान्छ । त्यस्तै कपालमा चायाँ
पर्न दिनु हुँदैन । कपालमा चायाँ परेमा सेलसन स्याम्पुले दिनमा एक चोटी कपाल नुहाउनु पर्दछ ।
अर्काको काइयो प्रयोग गर्नु हुदैन । डण्डीफोर, चायाँ र कपाल झर्ने प्रक्रिया साधारणतया तीन वटै
सँग सँगै देखिने गरेको छ । यी रोगको चिकित्सा एकैसाथ गर्नु पर्दछ । कपाल सफा गरेर तोरीको
तेल वा नरीवलको तेल लगाउने अभ्यासबाट पनि धेरैलाई फाइदा भएको देखिएको छ । दुई तीन
चोटी १५-१५ दिनको अन्तरमा कपाल खौरिएर लाभान्वित हुनेहरु पनि धेरै देखिएका छन् । यसो गर्दा
विज्ञान लेखमाला÷अंक ३५४ साउन २०६७
नयाँ कपालको जरा बलियो हुन्छ । तर, त्यो समयको अन्तरालमा पौष्टिक आहारको भने कमी हुन
दिनु हुन्न । कपालको स्वास्थ्यको लागि पौष्टिक आहारको ठूलो भूमिका रहेको हुन्छ । पौष्टिक तत्वको
कमीले पनि कपाल कमजोर हुने, एउटा कपाल दुइ भागमा छुट्टिन सक्ने इत्यादि हुन्छ । प्रोटिन,
भिटामिन तथा फलाम जस्ता तत्वहरु कपालको स्वास्थ्यको लागि महत्वपूर्ण हुन आउँछ । कपाल धेरै
चलाउने वा चिन्ताले कपाल तान्ने बानी छोड्नुृ पर्दछ । केटोकटीको कपाल तानातानको खेललाई
पनि प्रश्रय दिनु हुँदैन । कुन रोगबाट कपाल झर्न थालेको हो भन्ने कुरा पत्ता लगाउन सकिएमा
उपचार हुन सक्ने हुनाले चिकित्सकको सल्लाह लिनु आवश्यक देखिन्छ ।
- अच्युत शर्मा